10 Fonts Retro tayo sare leh oo bilaash ah waa inaad taqaanaa Haa ama Haa | Abuurista khadka tooska ah
Manuel Ramirez | | Fuentes, Khayraadka
Naqshadeynta ciyaarta fiidiyowga waxaan isku aragnaa inaan la halgamayno mararka qaarkood raadinta ilaha taas ka noqosho waqtiyo kale. Marka haysashada noocyo badan oo wanaagsan oo aan kaga bixi karno dhibaatada xilliyadaas aad ayey muhiim u tahay.
Noocyada dib-u-celinta waxay awood u leeyihiin inay kuu wareejiyaan waqtiyada kale, filimada iyo dareenka, marka mid kasta oo iyaga ka mid ah ayaa ansax ah inuu noqdo nooca qormada aad jeceshahay kaas oo lagu muujinayo xilligaas oo ay tahay inaad ku muujiso shaqo kasta.
2 Baruur dheh
9 Dhulalka sare
Qaabka iyo xarrago ayaa si qurux badan loogu dhajiyay qaabkan bilaashka ah ee uu naqshadeeyay Matthias Guggisberg, Dick Tracy qofna?
Isha laga dhumuc weyn waxaa loogu talagalay Timo Titzmann oo ku habboon abuurista boodhadhka qaabka retro iyo diskooga.
Sidii aan daqiiqad u wada soconay by dhicitaan iyo taabashadaas guridda ah, Portico waa font uu naqshadeeyay Mehmet Reha Tugcu. Waxaa ku jira qaab magaalo iyo mid qalafsan.
Nooca calaamadaha calaamadaha ah ee loo yaqaan 'cursive' font ayaa lagu dhiirrigeliyey xayeysiinta daabacan ee dhalooyinka macaanka na keena meelo kale iyo hareerayaal. Iyada oo leh firfircooni weyn, Hamster waa nooc kale oo bilaash ah oo bilaash ah.
La siddeetan font heer sare ah ayaa leh taabashada neon iyo retro si caadi u ah tobanka sano.
Font gaar ah oo ay abuureen Lucas Almeida iyo Dmitry Goloub. A naqshad guridda heer sare ah oo shakhsiyad buuxda.
Waxaa ku dhiirrigeliya farshaxanka farshaxanka si ay noogu qaadato mid kale font astaan ​​ah ee tobaneeyo sano ee la soo dhaafay. Xaqiiqdii waxay ku xasuusin doontaa qoraallada qaar ka mid ah daboolka kooxaha caanka ah.
Naqshadeynta loogu talagalay Blambot, shirkad u heellan noocyada majaajilada. Kooxdu waxay siisay Betty Noir bilaash mashruucyada dabeecadaha. A ugu fiican liiskaan.
Nooc tayo sare leh oo dib-u-habeyn ah oo uu naqshadeeyay Tyler Galpin. Waxaa u waxyooday boodhadhka baarkinka Muwaadiniinta Mareykanka.
Font kale oo xarrago leh oo na geynaysa 20-yadii si toos ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Fuentes » 10 nooc oo Retro ah oo bilaash ah oo ay tahay inaad ogaato haa ama haa
Ilo qaali ah .. xiiso leh.
Maya 2017 waxay lahjadda ku dhejineysaa 'garaafyada dhaqdhaqaaqa'